Izizathu Isitshayina Abafazi Tshata Abavela Kumazwe Angaphandle Amadoda
Kwiintsuku ezimbalwa edlulileyo, ingxelo wathi ukuba baninzi abafazi kwi-i-shanghai isitsho zabo zabo marrying abavela kumazwe angaphandle amadoda, kwaye abanye abantu waqala ukwenza ushishino ka-ukumiselwa Isitshayina ladies ukuba abavela kumazwe angaphandle amadoda. Kwi-Isitshayina umfazi s ingqondo, abavela kumazwe angaphandle amadoda ingaba richer, ngoko ke marrying abavela kumazwe angaphandle amadoda kuthetha kakhulu imali kuba nabo. Okwangoku, China ingu a siphuhlisa lizwe hayi otyebileyo, ngoko ke, ingxowa-langaphandle umyeni unje marrying a purse. Abaninzi Isitshayina abafazi zama ukuba siye ngaphesheya enye foreigners, ukuba abanako siye ngaphesheya, ubuncinane, babe ufuna enye abantu ukusuka Hong Kong, Macau kwaye Etaiwan. Marrying langaphandle umntu kuthetha okulungileyo loluntu isimo. China ngoku ingaba usoloko uzama olusuka kumazwe angaphandle abatyali-mali kwaye abaninzi Isitshayina abantu banqule kuzo zonke iinqwelo izinto ngoko ke marrying langaphandle umntu enyanisweni yalandelwa unyuko kwimicimbi yasekuhlalweni isimo. Marrying langaphandle mntu unako kuhlangana Isitshayina umfazi s vanity. Zonke Isitshayina abafazi kuba vanity, marrying abavela kumazwe angaphandle amadoda unako ukuze kwezabo iinjongo kwaye nceda zabo vanity. Marrying langaphandle umntu a springboard ukufikelela kwiinjongo zabo injongo ndihamba ngaphesheya. Abaninzi Isitshayina abantu ufuna ukuya ngaphesheya, kodwa uninzi awunayo amathuba, ngoko ke marrying langaphandle mntu unako ukuze zabo injongo ndihamba ngaphesheya ngokulula. Isitshayina abafazi ukuba abavela kumazwe angaphandle amadoda ingaba ngakumbi gentlemanly. Baya rhoqo sifunda western iimifanekiso ukuba abavela kumazwe angaphandle amadoda ingaba kakhulu polite kwaye bathambe enyanisweni ezi gentlemen ukutsala enkulu inani Isitshayina abafazi. Marrying abavela kumazwe angaphandle amadoda unako kuhlangana kwezabo freshness kwaye curiosity. Abo sele get osetyenziselwa Isitshayina abantu kwaye ingaba kakhulu abantu abaqhelekileyo kunye zabo ubomi isimbo, ngoko ke baya ufuna ukwenza ezinye iinguqu. Abanye Isitshayina abafazi kwakha budlelwane nabanye ngendlela yabo yonke imihla ubomi, enyanisweni baya tshata abavela kumazwe angaphandle amadoda. Abanye Isitshayina abafazi nzulu ngaphesheya okanye umsebenzi iinqwelo-inkxaso-mali ezingama-kwi-China, ngoko ke baya kuba baninzi chances ukuba zithungelana kunye abavela kumazwe angaphandle amadoda. Kunjalo, ezi abafazi uza tshata abavela kumazwe angaphandle amadoda emva kokuba kuba affections. Babe ngathi foreigners abahlala imikhuba kwaye masiko abazithandayo ukumsukela langaphandle ubomi isimbo nge-ngamazwe umtshato. Abanye Isitshayina abafazi begin ukuba ngathi langaphandle ubomi isimbo ukusuka lwabantwana abancinane ngokusebenzisa uluncwadi okanye i-media, ngoko ke baya ungathanda ukuba kuphunyezwe injongo yawo ngokusebenzisa marrying abavela kumazwe angaphandle amadoda. Isitshayina abafazi ukuba iinqwelo amazwe unako kuphunyezwe ukulingana phakathi amadoda nabafazi. Isitshayina rhoqo kuba ingcamango ukuba abantu bamele superior ukuba abafazi, ngoko ke Isitshayina abafazi tshata abavela kumazwe angaphandle amadoda kwaye ithemba ukuba ingaba no ubomi nomsebenzi amathuba kwicandelo kwilizwe langaphandle. Abanye langaphandle amazwe ubeke phambili imigaqo-nkqubo preferential ukutsala Isitshayina talents enyanisweni abanye talented Isitshayina abafazi kanjalo kuba chances. Ukuba babe yiya kwaye umsebenzi ngaphesheya, idla yabo yokuqala oyikhethileyo ufumana enye abavela kumazwe angaphandle amadoda. Mna awuvumi kangakanani, ndicinga ukuba yobulali girls kuphela ufuna foreigners njengenxalenye neminqweno yabo ukunaba impembelelo ngaphesheya. Mna ve sele kwi-China kuba phantse kwiminyaka emithathu ezayo.
baya kuphela care malunga abayeni babo neentsapho zabo.
Uyakwazi ukuva inyaniso uthando kunye nabo
abafazi jikelele ingaba igolide digging whores. Yiloo nto Asian Caucasian budlelwane nabanye ngabo disproportionately WMAW. Bahahaha, wayemthanda ur izimvo, mna andikwazi ukuyeka laughing, gd. Mna m a Sudanese kwaye ndiza abahlala e-china, kwaye ndifumana eyona ngokubhekiselele eyona unyango kwi-apha Ingaba abanekratshi yakho Sudanese ubuso okanye ingaba wena udumisa Isitshayina abantu s ububele. kwakunjalo kum owokuqala leyo yenza kum ukuva disgusting kwaye belittle kuwe. Kufuneka bazive neentloni malunga indlela wena isitsho kwaye kuba guqula njani ufuna wamanzi acociweyo kwi-China. Uthixo uyayazi njani oko kusenokuba nzima ukuba abe wamanzi acociweyo na irobothi kwilizwe langaphandle njengokuba foreigner apho. Enkosi kuba mnandi kwaye eluncedo Isitshayina abantu, ubomi bakho kwi-China unako musani ngoko ke, nangona sikwimeko yoqoqosho enzima njengokuba kubhaliwe basenokuba. Njengoko i-expat xa ebe wahlala ezahlukeneyo amazwe Aseyurophu nabanye, ndinako kuthi Isitshayina abantu ingaba ngenene PHEZU mnandi ukuba foreigners ukuba akukho namnye kuthi ayikwazanga ukufumana enye unyango kwi-nakumanye amazwe. Kodwa ndicinga ukuba oku kuza ukutshintsha ngokukhawuleza kwaye awusayi kuba wamanzi acociweyo njengoko ngendlela efanayo njengoko ixesha langoku, ngoko ke bonwabele ke ngoku. Ndininika i-icebiso: siphathe Isitshayina abantu abaphila efanayo ububele kodwa hayi thabathani njengoko into kuwe enyanisweni kufuneka afumane. uninzi foreigners kwi-china kukho rubbish leftovers zabo ekhaya kweli lizwe, kuba ababenako ayisasebenzi yenza abahlala apho kwaye kuba horrible ubomi ngenxa yabo inability eyahluka-hlukileyo izizathu. Ngoko ke, ngoko kokuba wenze isigqibo kwenzeka China ukuba fuck iqelana yabasetyhini kwaye uyakuthanda celebrity isimo. Xa abo ve scammed imali eyaneleyo kwi-China, baya kuyishiya lizwe kwaye abafazi baye ve fucked. Ndiqinisekile abanye foreigners fucked kuwe kakhulu. yiyo ufuna ngoko ke upset kwaye nomsindo. kwaye nceda musa t enkosi kum kuba oku inyaniso kakhulu. Ndifuna ukuqondisisa ukuba kuthi ukuba ucinga ngoko uza kubona indlela izinto. wonke society sele embi kwaye okulungileyo abantu. Isitshayina society sele kakhulu kodwa kufuneka nje kugxila foreigners ngenxa.
Mna kufuneka kuchazwe isizathu ngasentla
p ndiya kuvuma nani, bazalwana zoluntu, imiboniso iintsapho itshata umfazi kwi-China. Ezi langaphandle abafazi kuphela care malunga abanye ingeniso, ipropati, impahla, njl-njl. Baya ibango kokuba atshate zabo i-american indoda yakhe, hayi kuba imali. Inyaniso kukuba: Kokuba atshate zabo i-american indoda yakhe, hayi KUPHELA kuba imali. Bunch of ezintandathu iibhokisi kwaye kunjalo, bunch eyimfama stupid i-american abantu
Isitshayina Icacile Kufumana Ubudlelane e Isitshayina dating iinkonzo →